Gen Muqtar Xuseen Afrax oo laba qeybood qeyb kamid ah Mushaarkiis ugu deeqay Agoonta Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed (sawirro).. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Gen Muqtar Xuseen Afrax oo laba qeybood qeyb kamid ah...
Gen Muqtar Xuseen Afrax oo laba qeybood qeyb kamid ah Mushaarkiis ugu deeqay Agoonta Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed (sawirro)..
Kulanka todobaalaha ah ee ciidamada Booliiska ayaa lagu qabtay Xarunta agoonta ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Xildhibaano ka tirsan Aqalka-Sare ayaa ka qeyb-galay munaasabaddan mooralkooda loogu dhisay agoonta eey ka tageen ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Masuuliyiin kala duwan oo ka socday aqalka sare iyo saraakiisha Booliiska ayaa ka hadlay munsaabaddan, iyagoo ka wada sinnaa sidii loo caawin lahaa caruurtan aabayaashooda ku waayay difaaca dalka eey uga jireen.
Gen Muqtaar Xuseen Afrax oo ah sii hayaha Taliyaha Ciidadmada Booliiska Soomaaliyeed sidoo kale ah ku xigeenka Taliyah Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed ayaa ugu deeqay Caruurta agoonta Booliiska Mushaarkiisa marka loo qeybiyo labo qeyb kamid ah, waxa uuna sidoo kale ugu baaqay madaxda dalka iyo qeybaha kale ee bulshada in eey caawiyaan caruuta agoonta ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Dhawaan ayaa la furay xaruntan oo muddo kadib dib loo howl-geliyay, waxaana xariga ka jaray Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, isagoo waqtigasi sheegay in eey ku fureen tira yar oo aan aheyn dhammaan agoontii waaye aabaayaashooda.
Previous articleIlaa 50 Dhalinyaro ah oo Muqdisho loogu qabtay tababar ku saabsan horumarinta Afka hooyo
Next articleSiihayaha Wasiirka Warfaafinta oo tababar u soo xiray 50 Saxafi..